Gịnị Ka M Ga-eme Ka M Ghara Ibu Oké Ibu? | Ndị na-eto eto
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Norwegian Nzema Ossetian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tsonga Turkish Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Baịbụl gwara anyị ka anyị “ na-emeru ihe n’ókè. ” (1 Timoti 3:2) Otu n’ime ụzọ ndị anyị si egosi na anyị na-emeru ihe n’ókè bụ ịkpachara anya n’otú anyị si eri nri. Gbalịa mee ihe ndị anyị ga-ekwu n’ebe a.
Mara mgbe afọ juru gị. Adaure, onye dị afọ iri na itoolu, sịrị: “ Mgbe mbụ, m na-erife nri ókè ma ọ bụrụhaala na nri ahụ agaghị eme ka m buo ibu. Ma ugbu a, ọ na-abụ m rijuo afọ, mụ esere aka. ”
Erila nri ndị na-anaghị edozi ahụ́. Emeka, onye dị afọ iri abụọ na otu, sịrị: “ Naanị n’ime otu ọnwa m kwụsịrị ịṅụ mmanya ọtọ bịrịbịrị, efelatara m. ”
Kwụsị irife nri ókè. Nnenna, onye dị afọ iri na itoolu, sịrị: “ Ana m agbalị ka m ghara ịga kurukwuo nri mgbe afọ juru m. ”
Ihe Ga-enyere Gị Aka: Rie ugboro nri ole i kwesịrị iri n’ụbọchị. Ọ bụrụ na i meghị otú ahụ, agụụ nwere ike ịgụsi gị ike. Ị chọzie iri nri, gị erifee ya ókè.
Ma, ụfọdụ ndị na-ekwu na ha chọrọ ifelata ebughị ókè ibu. Otú ha dị dị mma. Gịnị ka ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị chọrọ ifelata? Otu nwa agbọghọ dị afọ iri na asatọ aha ya bụ Adaeze kwuru ihe nyeere ya aka. Ọ sịrị:
“Eburu m ókè ibu, ma ọ dịghị m mma. Ọ na-emekarị ka obi na-ajọ m njọ. Ọ na-adị m ka ahụ́ adịghị m.
“Ọ na-abụ m nọtụ, mụ erie nri ga-eme ka m felatatụ. Ma, m na-emecha dịghachi otú m dịbu. N’ihi ya, mgbe m dị afọ iri na ise, m kpebiri na m ga na-erizi naanị ihe ndị na-agaghị eme ka m buo ibu n’ihi na achọghị m ibu taa felata echi.
“M gara zụrụ akwụkwọ e dere ụdị nri mmadụ ga-eri, ya aghara ibu ibu na otú mmadụ ga-esi na-emega ahụ́. M bidoro mewe ihe ndị m gụtara n’akwụkwọ ahụ. M kpebisiri ike na o nweghị ihe ga-eme ka m kwụsị ime ha.
“Ihe a m mere baara m uru. N’ime otu afọ m malitere ime ihe ndị ahụ, m felatara. Otú m dị kemgbe afọ abụọ ugbu a bụ otú m chọrọ ịdị. O nweghị mgbe m chere na m ga-adị otú a.
“Ihe nyeere m aka bụ na e kpebiri m na emekataghị m rie ihe ga-eme ka m buo ibu ọzọ.”